Qarax ka dhacay Baydhabo Iyo Faah Faahin laga helaayo! – War La Helaa Talo La Helaa
Qarax ka dhacay Baydhabo Iyo Faah Faahin laga helaayo!
By madoobe	 On May 18, 2018
Shaaciye.com-Wararka inaga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee caasimadda KMG ee maamulka Koonfur Galbeed ayàa waxa ay sheegayaan in weerar bambo gacmeed loo adeegsaday uu fiidnimadii xalay ka dhacay magaaladaasi.
Qaraxan ayaa ahaa mid si weyn looga maqlay xaafada Onodka oo ah goobta uu qaraxa ka dhacay, dad goobjoogayaal ah ayaa inoo sheegay in bartilmaameedka uu ahaa askari Koonfur Galbeed ka tirsan oo xilligii afurka biyo ka cabayay maqaaxi yar.
Hay’ adaha ammaanka ayaa inoo xaqiijiyay in qaraxan ay ku dhaawacmeen ilaa afar qof oo shacab ah, kuwaasi oo la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla Baydhabo, si dhaawacooda wax looga qabto.
Ciidanka ammaanka ayaa xalay baaritaano amni xaqiijin ah ka waday aagga uu weerarkan ka dhacay, waxaana ay ku daba jiraan raggii falkan geystay.
Weerar ka dhacay duleedka Muqdisho iyo Xog laga helaayo!
Axmed Madoobe oo Xog xasaasiya ka baxshay qorshaha Farmaajo &Khayre!